गण्डकी प्रदेश सभामा बिबादास्पद सांसद शाही बेपत्ता प्रकरण : बिबादित तथ्यहरु - JanaSanchar.com
(२०७८ बैशाख १६, बिहीबार) 2021-04-29
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक नै अनिश्चितकालिन रुपमा स्थगित हुने गरी बेपत्ता भएको भनिएका रास्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही पोखराको चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुःगाको कथित “कथित” आईसियु कक्षमा भेटिएका छन्।
सार्वजनिक फोटो अनुसार, आईसियु कक्ष भनिएपनि त्यहाँ न कुनै भेन्टिलेटर देखिन्छ न अक्सिजन नै। अति संबेदनशील बिरामी राखिने त्यस आईसियु कक्षमा अन्य कोही चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नै देखिदैन । सांसद शाहीलाई बिरामीलाई लगाउने हरियो रंगको लुगा लगाएर सुताइएको छ। कति सम्मको अचम्म छ भने उनलाई भेट्न गएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र रास्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शंकर बराललाई नै भेट गर्न दिइएन।
आइसीयु कक्षमा भेट गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई डा. बद्री पौडेलले सांसद शाहीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले नयाँ टाइपको कोरोना संक्रमण भएको र अरुलाई समेत सर्न सक्ने भएकाकारण अन्यलाई भेट गर्न नदिइएको जानकारी दिए। अद्यापि सांसद शाहीको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएका थिए।
सांसद बेपत्ता प्रकरणले उग्र रुप लिईरहन्दा बिबादास्पद जानकारीहरु पनि सार्वजनिक भैरहेका छन्। डा. बद्री पौडेलले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सांसद शाही बिरामी भएर ११ बजे चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुःगामा उपचारका लागि आएको जानकारी गराईरहदा संसद शाहीलाई आइसीयु कक्षको ढोकामा कुरिरहेका उनका भाई जुमबिक्रम शाहीले बिहानको खाना खाएपछि करीब १२ बजे दाजु खिम बिक्रम शाहीले “टाउको दुख्यो, शरीर दुख्यो , ज्वरो आयो ” भनेपछि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुःगा ल्याइएको पत्रकारहरुलाई बताएका छन्। उनलाई डाक्टरहरुले धपेडीकाकारण सांसद शाहीलाई त्यस्तो भएको जानकारी दिएका छन्। तर ढोकैमा कुरिरहेका भाई जुमविक्रमलाई समेत बिरामी दाजु सांसद खिमबिक्रम शाहीलाई भेट गर्न दिइएको छैन।
अर्को उराठ लाग्दो तथ्य के छ भने गण्डकी प्रदेश सभाले त्यस प्रदेश सभाका सांसद र कर्मचारीहरुको बुधबार स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएकोमा बिहिबार बिहान बिहान ७ बजेर २० मिनेटमा दिइएको परिक्षण रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। तर कसले कहाँबाट कति बेला सांसद शाहीको स्वाब संकलन गरेर परिक्षणका लागि लाइफ केयर डायग्नोस्टिक प्रालिमा पठायो। त्यो खुलेको छैन। तर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको १० मिनेटपछि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहिबार बिहान ७ बजेर ३० मिनेटमा सांसद शाहीलाई कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट दिएको छ।
प्राप्त पछिल्लो समाचार अनुसार, सांसद शाहीको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै गरिएको तेश्रो स्वाब परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सांसद शाहीको तेश्रो कोरोना परीक्षण रिपोर्ट स्वाब प्राप्त भएको एक मिनेटमा नै प्रमाणित गरेको देखिएको छ। यस रिपोर्टले झन् अन्यौलता छाएको छ। यी बिबादास्पद रिपोर्ट तत्काल छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
अरु त अरु सांसद खिम बिक्रम शाही आबद्ध रास्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका संयोजक शंकर बराललाई समेत अस्पताल प्रशासनले भेट गर्न नदिएपछि बरालले आक्रोशित मुद्रामा अस्पताल प्रांगणबाट कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तँ तँ र म म शब्द प्रयोग गरेर झपारेका थिए। उनले कास्कीका सिडियोलाई “के यो देश एमालेको मात्र हो ? यो देशमा अरु मान्छे छैनन् ? कसको प्रतिनिधि भएर बसेको छस तँ त्यहाँ सिडियो ?” भनेर हप्काएका थिए। उनले कास्कीका सिडियोलाई आफ्नो पार्टीका सासंद खिमबिक्रम शाहीलाई “मार्ने इन्जेक्शन” लगाएर राखेको आरोप लगाउंदै “त्यो काम तेरो हो ” भनेर आक्रोश पोखेका थिए। नेता शंकर बरालले आफ्ना संसद खिमबिक्रम शाहीलाई पक्राउ गरेर बेहोश बनाएर राखिएको आशंका गरेका छन्। उनले अघि भनेका छन् ” त्यति मात्र हैन, सांसद शाहीलाई मर्न पनि सक्छ भनिएको छ। वहाँलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिएको पनि हुनसक्छ।।
१२ बजेदेखि अस्पताल भर्ना भएको भनिएका सांसद खिमबिक्रम शाहीले आफ्नो नेताहरुसंग दिउँसो एक बजेर ३७ मिनेट जाँदासम्म सम्पर्कमा रहेको भए पनि उनले आफु बिरामी भएको भन्ने बारेमा जानकारी नगराएको समाचारस्रोतको दाबी छ।
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो एक बजे शुरु भएर अविश्वासको प्रस्ताबमाथि छल्फल चलिरहेको थियो। त्यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सांसद पियारी थापाले सभामुख समक्ष” सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्क विहिन भएकोले खोजी गरिपाउँ” भनि सभामुख समक्ष निवेदन दिइन। त्यति मात्र हैन उनले सांसद शाही फेला नपरिन्जेल संसद स्थगित गर्न अपिल पनि गरिन। सभामुख नेत्रलाल अधिकारीले त्यही निबेदनलाई आधार मानेर “अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदा सम्मकालागि प्रदेशसभा स्थगित गरिएको” सुचना जारी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास माथि आज मतदान गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । एक सांसद सम्पर्क विहिन भएकोले खोजी गरिपाउँ भनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सांसद पियारी थापाले सभामुख समक्ष निवेदन दिएपछि सोही निवेदनको आधारमा अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदा सम्मकालागि प्रदेशसभा स्थगित गरिएको छ ।
सांसद शाही बिरामी वा अपहरण वा नाटक ?
सांसद खिमबिक्रम शाही बास्तबमा नै बिरामी परेका हुन् वा उनलाई अपहरण गरिएको हो वा उनले प्रलोभनमा परेर नाटक मात्र गरिरहेका छन्। त्यो भने छानबिनको बिषय बनेको छ। तर यो बिषय गण्डकी प्रदेश सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने बिषयमा जोडिएको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसको १५, माओबादी केन्द्रको १३, रास्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीको दुई र एकजना स्वतन्त्र राजिब गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे सांसद रहेका छन्।
आफ्नो सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पैसाको बिटो बोकेर खसी बोका जसरी सांसद किन्न हिडिरहेको भनेर समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। बिहिबार मुख्यम्नात्री गुरुङबिरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभामा अविस्वासको प्रस्ताबमा मतदान हुने कार्यक्रम थियो। हिजो गुरुङ मुख्यमन्त्री कायमै रहने कि नरहने भनेर टुंगो लाग्दै थियो। उनको मुख्यमन्त्री पद जोगिन कम्तीमा तीन जना सांसद आबश्यक थियो। त्यो तीन सांसद रास्ट्रिय जनमोर्चासँग रहेका छन्। उनले तिनै सांसदलाई लक्ष्यित गरेका थिए। रास्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद नै निर्णायक मानिएका थिए। रास्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद अनुपस्थित रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पद जोगिने अवस्था थियो। त्यसैबीचमा रास्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद बेपत्ता हुनुलाई शंकाश्पद मानिएको छ।
त्यसो त सांसद बेपत्ता हुनुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय नै सहायक बनेको जस्तो देखिएको छ। वर्तमान मुख्यमंत्री गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर उनकाबिरुद्ध तयार भएको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय रास्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको थियो। तर उसका सांसदहरुले अबिस्वास्का प्रस्ताबमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्। रास्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट अविस्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान हुने तर सरकार र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सहभागी नहुने रास्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय केही गोलमटोल जस्तो देखिएको थियो। अविस्वास प्रस्ताब पारित भएपछी सरकार गठन बारे लिखित सहमति गर्न समेत रास्ट्रिय जनमोर्चाले आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ। किन रास्ट्रीय जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठन बारे लिखित सहमति गर्न मानेन, अहिले यति बेला शंकाको बिषय बनिरहेको छ।
सांसद खरीद्बिक्रीमा गण्डकी प्रदेशमा तीन करोड रुपियाँसम्म खर्च भएको बजारी हल्ला चलिरहदा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधारहरु भेटिएका छैनन। सांसद शाही बेपत्ता भएको समाचारहरु सार्वजनिक भैरहदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति विस्वासिलो पात्र संघीय सांसद महेश बस्नेत पोखरामा नै रहेको चर्चा चलेको थियो। तर त्यो पनि पुष्टि हुन सकेन। सांसद बस्नेत काठमाण्डौमा नै रहेको समाचारस्रोतको दाबी छ।
बाघ कराउनु बाख्रो हराउनु जस्तै भएको पनि हुन्सक्छ। सांसद खरीद्बिक्रीमा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बचाउन एमालेजनहरु बिशेष गरी प्रदेश सांसद राजिब पहारी समेतको लगानी र उनकी धर्मपत्नी सिर्जना पहारी निर्देशक रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज प्रयोग भएको त हैन ? अचम्म त के छ भने बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद राजिब पहारीले प्रदेश सभाका सांसद र कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण नगरी संसद अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए। त्यही दिन प्रदेश सांसद र कर्मचारीको स्वाब संकलन गरी आएको रिपोर्टमा उनी सांसद पहारी, एमाले सांसद प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद धनकुमारी गुरुङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७८ बैशाख १६, बिहीबार) 2021-04-29 596 Viewed